एक महिनाभित्र कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी « प्रशासन
एक महिनाभित्र कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी
प्रकाशित मिति : 25 November, 2020 11:14 am
काठमाडौँ । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै पूर्णरुपमा तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरी हिजो मङ्गलवार देखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन थालेको छ । हिजो पहिलो दिनको परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भए लगत्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक महिनाभित्र परीक्षाफल पनि प्रकाशित गर्ने गरी तयारी अगाडी बढाएको जनाएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले यही महिनाको १६ गते परीक्षा कार्यक्रम सकिएपश्चात् २२ गतेभित्रै सबै केन्द्रबाट उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी बोर्डमा पठाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन् । यस वर्ष ४० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा भएको र विद्यालयबाटै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सकिने अड्कल गरिएको अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले भने– ‘तोकिएको समयमा उत्तर पुस्तिका प्राप्त भए एक महिनाभित्र सजिलै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सक्छौँ।’ तर प्राविधिक र उत्तरपुस्तिका ढिलो आए केही ढिला हुन सक्ने बोर्डको आकलन छ । उनले भने, ‘फरक जिल्लाका करिब १८ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका बोर्डले परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन सक्छ’ ।
बोर्डले फरक जिल्लाबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थीको हकमा प्रदेश र शाखा कार्यालयबाट परीक्षा सकेको केही दिनमा उत्तर पुस्तिका पठाउन निर्देशन दिएको छ । ती बाहेक होम सेन्टरबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थीको समस्या नपर्ने अड्कल बोर्डले गरेको छ ।
देशभर ४ हजार १ सय ५ केन्द्रमा गरी ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन् ।
Tags : कक्षा १२ परीक्षा परीक्षाफल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
15 June, 2021 8:13 pm
सल्यानमा जारी निषेधाज्ञा असार १० गतेसम्म लम्ब्याइयो
सल्यान । सल्यानमा पाँचौ पटक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
15 June, 2021 7:52 pm
स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ को महामारीमा जोखिममा
15 June, 2021 7:26 pm
सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता (पूर्ण पाठसहित)
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का